1. Inona ny sehatr'asa fampiharana lehibe ataonao? Fiara novaina na fiara sivily?
Rafitra familiana sy fampiatoana ireo fiara samy novaina na fiara sivily
2. Misy mari-pahaizana sa fanamarinana? Ary ny fitaovana lehibe indrindra sy ny fitaovana fanandramana?
Fanamarinana: fitaovana fanandramana IATF16949: kojakoja fandrefesana trilinear, X-RAY, GENERTATORS, Detector Metallographic, spectrograph sns sns. 20 mahery ny karazana vokatra mety ho R&D isam-bolana.
TT, amin'ny usd / euro, ny daty fampindramambola dia azo tohana aorian'ny fiaraha-miasa mandritra ny 6 volana
4. Inona no fomba fonosanao mahazatra? Azo ovaina namboarina?
Hazo CTn, kitapo opp ao anatiny, any ivelany ao anaty pallet., OEM & ODM no azo zahana.
1. Inona ny politika fiantohana anao?
Tangrui dia manolotra fiantohana mitarika indostrialy amin'ny vokatra rehetra ao anatin'izany ny Warranty Fanoloana Fiainana amin'ny rafitra familiana maro sy ireo ampahany navoakan'ny fampiatoana.
2. Inona ny politika fiverenanao?
Ny politikan'i Tangrui momba ny fiverenana dia azo zahana eto. Raha manana fanontaniana ianao dia antsoy izahay amin'ny 0086-553-2590369
1. Fa maninona no mividy vokatra Tangrui? Ny vokatrao lehibe? Iza amin'ireo tsena sy mpanjifa lehibe no tompoinao?
Tangrui dia nanam-pahaizana manokana amin'ny rafitra familiana sy ny fampiatoana mandritra ny 20 taona mahery, nanompo izahay Toyota, Honda, Kia, Nissan, Ford, Buick, Chevrolet, Renault, Geely, Chery, BYD sns. , baolina iraisana, foibe kodiarana.
Tsena lehibe: Amerika Avaratra
2. Inona ny Moq an'ny vokatrao vaovao?
300 set, raha toa ka mitahiry entana, tsy voafetra.
3. Ahoana ny fomba puchase ny stocking item?
Alefaso mivantana ny kaontinao.
1. Ahoana ny fandefasana ny baikiko (amin'iza)?
Ny kaontinay dia alefan'ny mpandefa anao voatendry, halefa ny baikonao araky ny fangatahanao.
2. Ahoana no ahafahako manara-maso ny kaomiko?
Azonao atao ny manara-maso ny kaontinao amin'ny mpitantana ny kaontinay, havaozina matetika ny mombamomba anao.
3. Ahoana no ahalalako fa nalefa ny volako?
Raha alefa ny kaontinao dia hahazo mailaka fanamafisana ny fandefasana ianao, alefa any amin'ny emai izay nampidirinao rehefa nametraka ny baiko. Azonao atao koa ny mijery ilay tsangambato miaraka amin'ny fihinanam-boanjo aoocunt.
4. Maharitra hafiriana ny kaomiko mankany amiko?
icluding bobongolo fotoana misokatra, famolavolana sarany sns sns bobongolo vanim-potoana misokatra 40-60 andro, fotoana famokarana faobe 35-45 andro, fotoana fandefasana 30-45 andro.
1. Ahoana no fomba hahatongavanao ho mpandraharaha manokana?
Niara-niasa bebe kokoa nandritra ny 6 volana, mpaninjara matihanina na mpamongady ampahan'ny fiara ao amin'ny tsenananao.
Knuckle familiana eo aloha, Hub misy kodiarana, Shock Absorber fingotra, Hood Shock Absorber, Tyre Ball Joint, Shock Absorber Bolt,